Ubi Osisi - Ihe A Ga-eji Elu Ala Peero - Potatoes News
Ihe ọkụkụ - ihe a ga-eme na ala pH
Ala pH na-emetụta ọtụtụ akụkụ nke mmepụta ihe ọkụkụ, ọkachasị nnweta ihe oriri.
Imirikiti ihe ubi ubi anyị dị ka ala pH na-anọpụ iche site na 6-7. A na-ewere ala nwere pH dị elu karịa 7.5 dị ka alkaline. Nke a nwere ike ibute nsogbu na iron na phosphorous nnweta nke osisi n'ihi nnukwu calcium carbonate na ala. Nnwale ala bụ naanị ụzọ iji mara ihe ọkwa pH bụ. Jason Clark bụ onye ọkachamara gbasara ọmụmụ ọmụmụ ala na Mahadum South Dakota State. Ọ na-ekwu na enweghị ndozi ọsọ ọsọ, yabụ na ị ga-eji ihe dị ebe ahụ rụọ ọrụ.
“Maka ihe ubi, na-ebute ala pH na mmezi, enwere ụfọdụ n’ebe ahụ na-agwa gị ka ị tinye sulfur ígwè ma ọ bụ sọlfọ elemental na ya. Clark na-ekwu, mana dịka o buru ibu, nke ahụ agaghị ekwe omume. “Ya mere, ọtụtụ ihe anyị na-agwa ndị ọrụ ugbo ka ha mee bụ nke mbụ na-amalite site na fatịlaịza nri gị ma hụ na ị na-enweta obere igwe gị na ndị ọzọ ebe ahụ. Mgbe ụfọdụ, ị nwere ike tinye ụfọdụ nri nri iji nyere aka na ụfọdụ n'ime nri nnweta. ”
Ọ na-ekwu na enwere ike itinye fatịlaịza na iron nwere fatịlaịza na furrow na akuku iji kwado nkwalite site na mgbọrọgwụ akuku tupu ya enwee ohere ịmetụta ọnọdụ ala alkaline. Tupu ị kụọ ihe ọ bụla, nhọrọ ngwakọ dị oke mkpa mgbe ala pH dị oke elu.
Hụ ihe ịga nke ọma ọzọ Ọrụ Ugbo Radio
Ala PH na nnweta ihe ọkụkụ
Ala pH bụ njirimara nke na-akọwa acidity ma ọ bụ alkalinity nke ala. Nyochawa ya, pH akọwapụtara dị ka log (ma ọ bụ) ọjọọ ma ọ bụ isi 10 uru nke ịta nke hydrogen ion (H +). Mmiri dị ọcha ga-adị nso na pH na-anọpụ iche, nke ahụ bụ 10 na mwepu 7 ntinye nke H + ion (10-7 [H +]). A na-egosipụta ịta ahụhụ a dị ka 7. Uru ọ bụla dị n'elu 7 pụtara ntụgharị H + ion dị ala karịa na pH na-anọpụ iche na ihe ngwọta ya bụ alkaline ma enwere ion hydroxyl (OH-) ndị ọzọ karịa ion ion.
Uru ọ bụla n'okpuru 7 pụtara na ntinye uche H + dị ukwuu karịa pH na-anọpụ iche na ihe ngwọta ya bụ acidic. A na-ewere ala dị ka acidic n'okpuru pH nke 5, yana oke acidic n'okpuru pH nke 4. N'aka nke ọzọ, a na-ahụta ala dị ka alkaline karịa pH nke 7.5 ma bụrụ alkaline dị elu karịa pH nke 8. A na-atụkarị ụkpụrụ pH ala mgbe 10 g nke a gwakọtara ala a mịrị amị na 20 ml nke mmiri okpukpu abụọ ma ọ bụ 20 ml nke 0.01 M CaCl2 azịza, a na-atụle pH site na iji electrode kwesịrị ekwesị jikọọ na mita pH. Nyocha nke ala a bụ akụkụ nke ọtụtụ ma ọ bụrụ na ọ bụghị usoro nyocha nke ala niile.
Enwere pH ala nke ukwuu inweta ihe ọkụkụ ụfọdụ. Ala pH "dị mma" dị nso na-anọpụ iche, a na-ahụkwa ala ndị na-anọpụ iche ka ha daa n'ime ihe dị iche site na pH ntakịrị acidic nke 6.5 na pH alkaline pH nke 7.5. Ekpebisiela ike na ọtụtụ ihe ọkụkụ na-edozi ahụ dịkarịrị ka osisi dị n'ime usoro 6.5 a ruo 7.5 pH, gbakwunyere ụdị pH a n'ozuzu ya dakọtara na-eto eto mgbọrọgwụ.
Nitrogen (N), Potassium (K), na Sulfer (S) bụ ihe ndị na-edozi ihe ọkụkụ na-egosi na pH dị ala anaghị emetụta ya karịa ọtụtụ ndị ọzọ, mana ọ ka dị ụfọdụ. Phosphorus (P), na-emetụta ya. Na ụkpụrụ pH alkaline, karịa karịa pH 7.5 dịka ọmụmaatụ, ion ion phosphate na-eme ngwa ngwa na calcium (Ca) na magnesium (Mg) iji mepụta ogige ndị na-adịghị edozi.
Na ụkpụrụ pH acidic, ion phosphate na-eme na aluminom (Al) na iron (Fe) iji mepụta ogige ndị anaghị edozi. Imirikiti ihe ndị ọzọ na-edozi ahụ (micronutrients karịsịa) na-adịkarị obere mgbe ala pH dị elu karịa 7.5, ma n'eziokwu, enwere optimally na pH ntakịrị acid, dịka 6.5 ka 6.8. Ewezuga bụ molybdenum (Mo), nke na - egosi na ọ pere mpe n’okpuru pH acidic ma nwekwaa ike karịa na pH alkaline dị mma.
N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-agbakwunye ihe na ala iji dozie pH. Otú ọ dị, a na-adịghị eme nke a n'ọtụtụ ebe n'ihi nnukwu ụgwọ. A na-eme ya nke ọma na ntinye akwụkwọ nri mkpụrụ osisi ebe a na - ejikwa ihe ọkụkụ osisi ọ bụla ma ọ bụ ebe pere mpe (eg <10 ruo 20 acres) jikwaa pH maka ala ahịhịa na - emegharị osisi dịka ụfọdụ ifuru, osisi, na / ma ọ bụ obere mkpụrụ osisi (yabụ bluuberi) na kranberị). Ọ dị mkpa iburu n'uche na imirikiti ihe ọkụkụ na-aga n'ihu ga-eji nwayọọ nwayọọ belata ala pH ka a na-ewepụta ion H + wee gbanwee nitrate site na ụmụ nje. Nke a bụ eziokwu karịsịa ebe a na-etinye fatịlaịza N dịka ammonia anhydrous, ammonium sulfate, na urea.
Ma ị gbalịrị ịhazi pH ma ọ bụ na ị gbalịa, ọ dị mkpa ịghọta ụzọ ndị ọzọ iji mee ka nnweta na iji nke nri na-agbakwunye. Enwere ike ime nke a n'ọtụtụ ụzọ maka nri ndị a kpọtụrụ aha n'elu nke na-emetụta oke oke ala pH, acidic ma ọ bụ alkaline. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike itinye fatịlaịza P n'ime ma ọ bụ dị nso na mkpụrụ-ahịrị na akuku iji kwado mbido oge nke ion phosphate site na mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ tupu ikwe ka ọ meghachi omume na cations ala nke na-achịkwa n'okpuru acidic ma ọ bụ ala ala ala pH.
N'okpuru ala ala pH ụkpụrụ, na phosphate fatịlaịza nwere ike etinyere na ìgwè ndị agha na fatịlaịza nke site na ihe ionized ụdị amonia (NH4). Nke ahụ ga-ekwe ka ntakịrị acidification nke ala n'akụkụ n'akụkụ fatịlaịza. Methodzọ ọzọ bụ imepụta granulu fatịlaịza na-edozi ahụ nke nwere N, P, na ọbụna elemental S nwere fatịlaịza, maka itinye ala ala alkaline. Ala nke dị nso na granule ahụ ga-agbakwa ntakịrị ma kwe ka nkwalite P dị elu mgbe mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ na-egbochi granulu.
Ọzọ atụ bụ foliar ngwa nke soluble Fe fatịlaịza ogige ka Fe-enwekarị kụrụ n'ubi toro na elu pH ala ebe fatịlaịza na-eme ngwa ngwa na ala na edozi na-kekọtaworo na ọ dịghị ka osisi. Nke a bụ ya mere ala etinyere Fe fatịlaịza anaghị emezi nke ọma Fe erughị eru. Site na izere ala ma tinye Fe na epupụta, obere ihe ọkụkụ chọrọ Fe na-eme nke ọma webata ihe ọkụkụ.
Oge ọzọ ị nwere ala ala ewerela n'ubi gị, wepụta oge iji mara ihe ụkpụrụ pH dị na nsonaazụ gị. Ọ bara uru iji ụkpụrụ ndị a tụnyere ụkpụrụ ala pH mbụ wee chọpụta ma enwere mgbanwe nke ala pH. Site na nyochaa ụkpụrụ pH mgbe niile (kwa afọ 2 ruo 3) n'ọhịa, ị nwere ike ịtụle ihe iji bulie pH nke ala site na acidic ruo na nso pH ụkpụrụ na-anọpụ iche site na liming.
IHE IME AKW PHKWỌ ELU AH PH
Enwere ike inweta ihe oriri na-edozi ahụ na mmụba ihe ọkụkụ ka mma mgbe ị na-agbakwunye ihe ndị na-emebi emebi na ala acidic. Nke a nwere ike bụrụ ihe kacha mkpa maka kụrụ ihe chọrọ pH na-anọpụ iche, dị ka legume forages ma ọ bụ akụrụngwa, dịka ụdị nje Rhizobia anaghị agbalite ma dozie N n'ụzọ dị irè n'okpuru pH ụkpụrụ erughị 5.5
Tags: na-achịkwa alanriakuku teknụzụnjikwa ala
Oge dị mkpa maka igbo igbo n'etiti nduku akuku, mmechi mmechi
Atolọ mmiri nduku (AHDB ọba akwụkwọ ihe ọmụma)
Nematodes- na-aghọgbu pests pests na ọnyà kụrụ
Nduku ala ike nnyocha amalite
Nduku nwere ike itinye ụdị nitrogen dị iche iche 3
Nduku nkpuru osisi Brabant: ugha buru ibu na igha wayo
Colombia: Achịcha a haziri ahazi, ihe ọzọ iji merie nsogbu ahụ
AKW STKWỌ AKW :KWỌ: A NA-AH IN N'SLỌ AH KA NT KAKWU AH KA KAIDA